Awoodda Al-Shabaab: 16-kii askari ee Kismaayo ka lugeysay sidey Baraawe ku gaareen? - BBC News Somali
Awoodda Al-Shabaab: 16-kii askari ee Kismaayo ka lugeysay sidey Baraawe ku gaareen?
16 Disembar 2019
Waa la cusbooneysiiyay 27 Nofembar 2020
Askeri Soomaali ah oo meel duur ah geed ku yaalla ku gabanaya
Janaraal Odowaa Yuusuf Raage, oo ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa isagoo ka hadlayay awoodda kooxda Al-Shabaab wuxuu tusaale usoo qaatay askar uu sheegay inay u kala lugeeyeen magaalooyinka Kismaayo ilaa Baraawe.
Odowaa ayaa marka uu hadalkan sheegayay waxa uu hortaagnaa Baarlamaanka Soomaaliya, halkaasoo uu uga jawaabayay su'aalo adag oo ay xildhibaannadu weydiinayeen, kuwaasoo la xiriira amniga.
Isagoo mid mid usoo qaadanaya su'aalihii loo soo bandhigay ayuu xildhibaan golaha fadhiyay lasoo booday su'aal ahayd: "ka warran awoodda cadowga?"
Islamarkiiba waxaa isqabsaday buuq golaha oo dhan hareeyay, waxayna mudaneyaashu u muuqdeen inay su'aashaas la wadadhacsanaayeen.
Hase ahaatee taliyaha ayaa markii uu ka jawaabayay sheegay in Al-Shabaab ay awooddoodu aad u hooseyso, sida uu hadalka u dhigay.
"Awooddoodu aad bay u hooseysaa, waxaana rabaa inaan tusaale cad idinka siiyo sida ay awooddoodu u hooseyso. Muddo hadda ay kasoo wareegtay labo bilood, 16 askari ayaa waxay kasoo lugeeyeen magaalada Kismaayo, waxaa laga yaabaa xildhibaanno badan inay xaaladdaas la socdaan. Ciidankaas waxay dagaallo badan kusoo galeen inta u dhaxeysa Kismaayo iyo Baraawe, shan askari ayaa kasoo dhimatay, midna wuu kasoo dhaawacmay, intoodii kalena waxay lugtii ay ku socdeen ku imaadeen magaalada Baraawe. Marka awoodda cadowga meeshaas ayaad ka dareemi kartaa", ayuu yiri Janaraal Odowaa.
In kastoo ciidamada Soomaaliya ay saldhigyo ku leeyihiin meelo badan, haddana fariisin kuma lahan inta u dhexeysa Barawei iyo deegaanna ku dhow Kismaayo.
Taliyuhu ma uusan caddeynin inta maalmood ee ay ciidankaas lugeynayeen iyo sahayda ay wateen. Sidoo kale ma uusan faah-faahinin jidka ay ciidankaas mareen inuu ahaa dhinaca xeebta ama dhinaca waddada sii marta magaalooyinka.
Ciidamada Soomaaliya ma dhar bay u baahan yihiin mise daryeel?
Maxaa ka khaldan tayada ciidammada Soomaaliya?
Xigashada Sawirka, Abdinur Mohamed Ahmed
Taliyaha wuxuu sheegay in ciidanka Kismaayo ka lugeeyay ay dagaallo kula sii kulmeen dhexda
Ma jirin dood ay xildhibaannadu ka keeneen sida ay suurtagal ku noqotay arrintaas, ama inay dhab tahay, maadaama sida la ogyahay ay Al-Shabaab ku xooggan yihiin deegaanno badan oo ku yaalla inta u dhaxeysa Kismaayo iyo Baraawe.
Magaalada Jilib oo ku taalla gobolka Jubbada dhexe ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah goobaha ay fariisinka ugu weyn ku leeyihiin Al-Shabaab ee koonfurta Soomaalia.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay gudahooda, dilal dhowr ah ayaa magaalada Jilib loogu geystay dad lagu eedeeyay inay basaas yihiin oo ay gudbinayeen macluumaad ku saabsan Al-Shabaab.
Dadka la dilay ayaa ahaa kuwo horay uga tirsanaa kooxda.
Deegaannada ku dhow Baraawe iyo Jilib ayaan sidoo kale ah meelaha ay ka dhacaan duqeymaha ugu badan ee ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka.
Mar uu taliyuhu ka jawaabayay su'aal ku saabsaneyd maleyshiyaadka dowladda ka madaxa bannaan ee la dagaallama Al-Shabaab ayuu sheegay inay jiraan koox lagu magacaabo Macawisleyda, kuwaasoo uu carrabaabay inay mudan yihiin in laga faa'iideysto.
"Nimanka macawisleyda ah waa run inay meelo badan joogaan, way ladagaallamaan dadka cadowga ah, waana fursado runtii u baahan in laga faa'iideysto, qaarkoodna waa laga faa'iideystay, qaarkoodna waa lagu socdaa. Sida aad la socotaan, gobollo badan ayaa ciidankaas laga soo diiwaangaliyay, waxaana lagu soo daray xaaladda ciidanka xoogga Soomaaliyeed", ayuu yiri.
"Ha naloo kordhiyo miisaaniyadda ciidanka"
Xigashada Sawirka, Jubbaland Tv
Xildhibaannada qaar ayaa taliyaha ka dalbaday in ciidanka la kala baddalo
Taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa inta uu ka hadlayay golaha baarlamaanka waxa uu dhowr jeer sheegay in mudaneyaasha golaha shacabka looga baahan yahay inay ciidanka u ansixiyaan dhaqaale dheeraad ah.
Su'aal ay weydiiyeen xildhibaannada oo la xiriirtay dhinaca amniga ayaa ku saabsaneyd in ciidamada la kala baddalo.
Laakiin Taliyaha ayaa ka cudurdaartay arrintaas, oo uu ku tilmaamay mid dhaqaale badan u baahan.
"Xildhibaan Nuuraani wuxuu yiri 'isbaddal halagu sameeyo ciidanka', arrintaas way fiican tahay laakiin xildhibaankeyga qaaliga ah waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in miisaaniyadda Ciidanka Xoogga Soomaaliyeed in la kordhiyo, annagana hanala gaarsiiyo heer aan ciidan farabadan oo aan kala baddalno ku yeelanno", ayuu yiri Odowaa.
Tayada direyska ciidanka xoogga ayaa mar walba la dhaliilaa, waxaana marar badan lasoo tabiyay in rag ka tirsan Al-Shabaab oo labiska ciidanka xiran ay weerarro geystaan.
Al Shabaab iyo tuutaha Milateriga
Waxaa sannadkii hore baraha bulshada lagu baahiyay sawirro la sheegay in laga soo qaaday xubno ka tirsan ururka Al Shabaab oo ku sugnaa magaalooyinka Jilib iyo Saakoow ee dalka Soomaaliya.
Sawirka waxaa sidoo kale ka muuqday Al-Shabaab oo ku labisan tuutaha militariga iyo gawaari leh astaanta ciidanka miltariga dowladda Federaalka.
Xigashada Sawirka, SOMALIMEMO
Ninka cimaamadda u duuban tahay waxaa uu xiran yahay tuutihii ciidammada dowladda
Janaraal Maxamed Nuur Galaal oo horay uga tirsanaa taliskii militarigii Soomaaliyaa ayaa mar sii horreysay BBC-da u sheegay in agabka militariga sida direyska iyo hubka ay Al Shabaab labo siyaabood ku helaan.
1- Iyadoo aan ciidamada dawladda Soomaaliya la siinin mushaar joogto ah, ayna leeyihiin carruur iyo xaasas, sidaa darteedna ay duruufta nolosha ee ku xeeran ku khasbayso inuu askarigu reerkiisa u helo nolol, oo uu suuqa geeyo wixii uu hayo.
2- In Shabaab ay ka furtaan darees iyo hub ciidanka dawladda.
Isagoo arrintaas sii adkaynaya ayuu yiri "ka furashadu laba iyo seddex kaliya ma ah ee guutooyin dhan ayey wax ka qaadanayaan. Marka la tababarayo waxaa la yiraahdaa ' dharkiinii iyo kabihiinii iyo qalabkiinii cadawga ayaa haysta ee ka doonta' waana ka doonteen, waana helaan oo waa kuwaas aad sheegayso".
Ma nin Soomaali ah baa fuliyay dilkii xildhibaanka UK ee dhacay shalay?
Turkiga ma wuxuu diyaarado casri ah ku hubeynayaa Itoobiya?
43 Daqiiqadood ka hor
TOOS Saamayn ka dhalatay dhaqdhaqaaqayadii ciidan ee dhawaan ka socday Guriceel
15-ka garsoore ee gaaray go'aanka dacwaddii badda Soomaaliya iyo Kenya
12 Oktoobar 2021
Sidey Ingiriiska iyo Talyaaniga uga heshiiyeen xuduudda badda ee Soomaaliya iyo Kenya?
11 Oktoobar 2021
Yaa dilay halyeeygii Afrika?
Nin Soomaali ah oo haweeney 30 sano raadinayay si uu ugu mahadceliyo
29 Sebtembar 2021
Kim Jong-un oo ku dhaartay in uu dhisayo ciidan 'il ma qabato ah'
13 Oktoobar 2021
Ninkii hadda ka hor Khatarta ka badbaadiyay Joe Biden oo abaalkii loo guday
"Cabsida aan ka qabo ragga si weyn ayay ii saameysay, aniga oo 24 jir ah waligeey wiil ima uusan shukaansanin"
Maxaa kala qabsaday Cali Dheere iyo dadkii u diidi jiray inuu atoore noqdo dhirirkiisa awgiis?
Markii uu Kim Jong-un dilay adeerkiis ninkii lacagta u keeni jiray muxuu sameeyay?
Isbarbardhigga awoodda ciidamada badda ee Soomaaliya iyo Kenya
Bajaajle daacad ah oo soo celiyay $50,000 oo uu waddada ka helay
Waxaan guursaday aniga oo 64 jir ah